Waa la daabacay24.05.2022
Haddii aad Finland ka guurto, xusuusnow in aad guuritaankaada ku wargeliso saraakiisha dowladda. U guuritaanka dal kale waxay saamayn ku yeelan kartaa tusaale ahaan ammaankaada bulshada ama sharcigaada deganaanshaha.
Ku wargelinta saraakiisha guuritaanka
Marka aad Finland ka guurto oo aad dibadda u guurto, waa in guuritaanka ku wargelisaa Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka (Digi- ja väestötietovirasto). Wargelinta guuridda waxaad ka sameyn kartaa internetka ama foomka aad ka heleyso boostada iyo goobta adeegga ee Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan arrintan waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Ma lumin karaa ogolaanshaha joogista? .
aad Kelada ka hesho kaalmada ijaarka,
kaalmada ilmo haynta, ama
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan ammaanka bulshada Finland waxaad ka heleysaa bogagga internetka ee Kelada iyo bogga InfoFinlandi Ammaanka bulsho ee Finland .
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaPosti
Ogeysiinta guuristaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Ka laabashada ogolaanshaha joogitaankaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Dib u laabashada iskaa ahLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa